तपाइँ यहाँ हुनुहुन्छ: होम / धेरै सोधिने प्रश्नहरु (FAQ)
FAQ - भिसा कागजात पैकेट र आधुनिककृत आप्रवासी भिसा (MIV)
ESTA का लागि शुल्क कति छ र यो कसले तिर्नु पर्दछ?
यदि मैले बिना ESTA संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गरें भने के हुन्छ?
यदि म नेपालमा बसोबास गरिरहेको तेस्रो देशको नागरिक हुँ भने, के मैले नेपालमा गैर आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छु?
के सबै गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरुले भिसा अन्तर्वाताका लागि अमेरिकी दूतावासमा आउनै पर्छ?
मेरो गैर आप्रवासी भिसाको म्याद चाँडै समाप्त हुँदैछ र म यो नवीकरण गर्न चाहन्छु। के मैले फेरि पूरै भिसा आवेदन प्रक्रियामा जानु पर्छ?
मेरो राहदानीको म्याद समाप्त भएको छ, तर यसमा भएको अमेरिकी भिसा अझै पनि मान्य छ। के मैले नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ?
के मैले आफ्नो भिसा आवेदन फारम विद्युतीय रुपमा पेश गर्नै पर्छ?
"प्रशासनिक प्रशोधन" भनेको के हो?
मैले मेरो भिसा कसरी पढ्ने र बुझ्ने?
मेरो DS-160 पेस गर्ने र पुष्टि पृष्ठ प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि प्रश्न छ। म थप जानकारीको लागि कहाँ जान सक्छु?
मैले मेरो नाम परिवर्तन गरेँ। के मेरो पुरानो नामको U.S. भिसा अझै पनि मान्य हुन्छ?
DS-160 फारम भर्दा मैले सोसल मिडियाको बारेमा कुन जानकारी दिनु पर्नेछ?
तपाईं भिसा छूट कार्यक्रम लागू हुने देशको नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँसँग मिसिनले पढ्नसक्ने राहदानी छ, तपाईँ अस्थायी व्यापार वा ९० दिन भन्दा कमको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, अन्य कार्यक्रमका आवश्यकताहरू पुरा गर्न र यात्रा प्राधिकरणको लागि इलेक्ट्रोनिक प्रणाली (ESTA) को प्राधिकरण प्राप्त गर्नु भएको छ भने तपाईं भिसा छूट कार्यक्रमको लागि योग्य हुनुहुन्छ।
तपाईंले यस कार्यक्रमको उपयोग गर्न भिसा छूट कार्यक्रम योग्य देशको नागरिक हुनु पर्छ। VWP योग्य देशको नागरिक नभएसम्म, स्थायी बासिन्दा भए पनि VWP कार्यक्रमका लागि योग्य हुदैँनन् । हामी तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा अघि आफू VWP को लागि योग्य भए/ नभएको थाहा पाउन VWP वेबसाइट हेर्न अनुरोध गर्दछौं।
प्र.3 ESTA का लागि शुल्क कति छ र यो कसले तिर्नु पर्दछ?
भिसा छूट कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका जाने सबै यात्रीका लागि ESTA दर्ता आवश्यक छ। ESTA दर्ताको लागि शुल्क US$ १४ पर्छ । शुल्क डेबिट कार्ड वा तल दिएका क्रेडिट कार्डमा कुनै पनि उपयोग गरी अनलाइन भुक्तान गर्न सकिन्छ: भिसा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, वा डिस्कवर। यदि तपाईंसँग क्रेडिट कार्डको सही प्रकार छैन भने तेस्रो पक्ष (यात्रा एजेन्ट, परिवारका सदस्यहरू, आदि) ले तपाईंको लागि ESTA शुल्क तिर्न सक्नेछन। ESTA दर्ता निषेध भएमा, शुल्क मात्र US$ ४ पर्नेछ ।
प्र.4 यदि मैले बिना ESTA संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गरें भने के हुन्छ?
ESTA मार्फत अनुमोदन प्राप्त नगरेका भिसा छूट कार्यक्रमका यात्रीहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै पनि हवाई जहाजमा बोर्डिंग गर्न अस्वीकार गरिने अपेक्षा गर्नुपर्छ। तपाईंलाई बोर्ड गर्न अनुमति दिइयो भने, तपाईंलाई प्रविष्टि (अर्थात्, आगमन हवाई अड्डा)को अमेरिकी प्रवेशको पोर्ट ऑफ़ एंट्रीमा इन्कारको सामना गर्ने सम्भावना हुन सक्छ। ESTA दर्ता पूरा गर्न सामान्यतया केही मिनेट लाग्छ, प्राधिकरण प्राय: केही सेकेन्डमा भइहाल्छ, र यात्रीको राहदानीको वैधता दुई वर्ष भित्रको भएसम्म, ESTA दुई वर्षको लागि मान्य हुन्छ । यात्रीको राहदानीको वैधता दुई वर्षभन्दा कम रहेको अवस्थामा, ESTAको वैधता पासपोर्टको वैधतासंगै समाप्त हुन्छ।
प्र.5 यदि म नेपालमा बसोबास गरिरहेको तेस्रो देशको नागरिक हुँ भने, के मैले नेपालमा गैर आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छु?
आवेदकलाई सामान्यतया आफ्नो देश वा आफूले निवास गरेको देशमा आवेदन गर्न सल्लाह दिइन्छ। नेपालमा कानूनी रूपमा उपस्थित व्यक्तिले नेपालमा भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्छ। तर, आवेदकहरुले जहाँबाट सुविधा हुन्छ वा हुँदैन, आफ्नो गृह जिल्लामा अपॉइंटमेंट पाउन ढिलाइ नहुने आदि कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। विचार गर्नुपर्ने एउटा कुरा, उदाहरणका लागि, आवेदकले बलियो सम्बन्ध देखाउन सक्ने कन्सुलर जिल्ला चुन्नु हो।
भिसा जारी हुनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, न त संसाधन समयको कुनै ग्यारेन्टी छ। इन्कार गरिएमा, आवेदन शुल्क फिर्ता हुने छैन।
प्र.6 के सबै गैर आप्रवासी भिसा आवेदकहरुले भिसा अन्तर्वाताका लागि अमेरिकी दूतावासमा आउनै पर्छ?
हो पर्छ, धेरैजसो आवेदकहरुले। भिसा अन्तर्वाता आवश्यकताका केही अपवाद छन्। निम्न आवेदकहरुले सामान्यतया व्यक्तिगत रुपमा उपस्थित हुनु पर्दैन:
A-1, A-2 (केन्द्रीय सरकारका अधिकारी जो सरकारी व्यापारका लागि यात्रा गर्दै छन्), C-2, C-3 (केन्द्रीय सरकारका अधिकारी जो सरकारी व्यापारका लागि ट्रान्सिटमा हुनुहुन्छ), वा G-1, G-2, G-3, G-4 (अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सन्दर्भमा यात्रा गर्ने केन्द्रीय सरकारका अधिकारीहरु, वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कर्मचारीहरु) का आवेदकहरु
प्र.7 मेरो गैर आप्रवासी भिसाको म्याद चाँडै समाप्त हुँदैछ र म यो नवीकरण गर्न चाहन्छु। के मैले फेरि पूरै भिसा आवेदन प्रक्रियामा जानु पर्छ?
प्रत्येक गैर आप्रवासी भिसा आवेदन एउटा अलग प्रक्रिया हो। यदि तपाईंको पहिले भिसा थियो र तपाईंको वर्तमान गैर आप्रवासी भिसा अझै पनि मान्य छ भने पनि, सामान्य ढंगले आवेदन गर्नैपर्छ।
प्र.8 मेरो राहदानीको म्याद समाप्त भएको छ, तर यसमा भएको अमेरिकी भिसा अझै पनि मान्य छ। के मैले नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ?
छैन । यदि तपाईंको भिसा अझै पनि मान्य छ भने दुवै राहदानीसँग (पुरानो र नयाँ) संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, जब सम्म भिसा वैध छ, र क्षतिग्रस्त भएको छैन, र तपाईंको यात्राको प्रमुख उद्देश्यका लागि भिसा उचित प्रकारको छ। (उदाहरण: पर्यटक भिसा , यदि तपाईंको यात्राको प्रमुख उद्देश्य पर्यटन हो भने)। साथै, दुवै राहदानीमा नाम र अन्य व्यक्तिगत विवरण उस्तै हुनुपर्छ। नयाँ राहदानीमा भएको तपाईंको राष्ट्रियता, भिसा ग्रहण गरेको राहदानीमा भएको जस्तै हुनुपर्छ।
तपाईंको एउटा राष्ट्रियता अमेरिकी होइन भने, तपाईंको रुचि अनुसार जुनै पनि राष्ट्रियताको उपयोग गरेर आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले अमेरिकी दूतावासलाई तपाईंको आवेदन फारममा सबै राष्ट्रियताको खुलासा गर्नुपर्छ। दोहोरो नागरिकता भएको अमेरिकी नागरिकको हकमा अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश र प्रस्थान गर्नुपर्छ।
प्र.11 के मैले आफ्नो भिसा आवेदन फारम विद्युतीय रुपमा पेश गर्नै पर्छ?
पर्छ, तपाईंले DS-160 पूरा गर्नुपर्छ र आफ्नो अमेरिकी दूतावासको भिसा अन्तर्वातामा जाँदा आफूसँग DS-160 पुष्टि पृष्ठ ल्याउनै पर्छ।
प्र.12 "प्रशासनिक प्रशोधन" भनेको के हो?
केही अस्वीकृत भिसा आवेदनहरूलाई थप प्रशासनिक प्रशोधनको आवश्यकता पर्दछ । प्रशासनिक प्रशोधनको आवश्यक पर्ने खण्डमा कन्सुलर अफिसरले अन्तर्वार्ताको अन्त्यमा आवेदकलाई सूचित गर्छन् । प्रशासनिक प्रक्रियाको अवधि प्रत्येक केसको व्यक्तिगत परिस्थितिको आधारमा फरक हुन्छ । आपतकालिन यात्रामा बाहेक (उदाहरण का लागि गम्भीर बिरामी, घाइते, वा नजिकको परिवारमा मृत्यु आदि कारणमा) प्रशासनिक प्रशोधनको स्थितिबारे सोधपुछ गर्नु अघि आवेदकहरूले अन्तर्वार्ताको मिति वा पूरक कागजातहरू पेश गरेको मिति मध्ये पछिल्लो मितिदेखि कम्तिमा १८० दिन कुर्नुपर्दछ्।
कन्सुलर अधिकारी वेबसाइटको यस वेब पृष्ठ प्रशासनिक प्रसोधनको बारेमा थप जानकारी छ।
प्र.13 मैले मेरो भिसा कसरी पढ्ने र बुझ्ने?
तपाईंले आफ्नो भिसा प्राप्त गर्ना साथ भिसामा छापिएको तपाईंको सबै व्यक्तिगत जानकारी सही भए/नभएको सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस्। तपाईंको भिसामा भएको कुनै पनि जानकारी तपाईंको राहदानीमा भएको जानकारीसँग मिलेन वा अन्यथा गलत छ भने, तुरुन्त जारी गर्ने अख्तियारसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।
तपाईंको भिसाको समाप्ति मिति तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न भिसा प्रयोग गर्ने अन्तिम दिन हो। यसले तपाईंलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा कति लामो रहन सकिन्छ भन्ने संकेत गर्दैन। तपाईंको प्रवास तपाईंले प्रवेश गर्ने पोर्टमा होमल्याण्ड सुरक्षा विभाग द्वारा निर्धारण गरिन्छ । जब सम्म तपाईंले आफ्नो प्रवासमा होमल्याण्ड सुरक्षा विभागको निर्णय पालना गर्नुहुन्छ, तबसम्म तपाईंलाई कुनै समस्या पर्दैन।
भिसा विवरण बारे थप जानकारी अमेरिकी राज्य कन्सुलर मामिला विभागको वेभसाइटमा पाउन सकिन्छ।
तपाईंको एयरलाइनले एउटा खाली भन्सार घोषणा फारम 6059B दिनेछ । सँगै यात्रा गर्ने एउटा परिवारको लागि एउटा भन्सार घोषणा मात्रै आवश्यक छ।
भिसाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश ग्यारेन्टी दिँदैन, तर विदेशबाट आउने विदेशी नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको पोर्टसम्म यात्रा गर्न र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्ने अनुमतिको लागि अनुरोध गर्न दिन्छ। होमलेन्ड सेक्युरिटि विभाग, अमेरिकी भन्सार र सीमा संरक्षण (CBP) अधिकारीहरुसँग संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशको लागि अनुमति, दिने/नदिने र कति लामो प्रवास अवधि दिने भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार छ। प्रविष्टिको पोर्टमा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशको मन्जुरी दिँदा, भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले प्रवासको अवधि निर्धारण गर्नेछ। पहिले, यात्रीले यो जानकारीसँग एउटा कागज I-94 (प्रवेशको रेकर्ड) प्राप्त गर्दथे। यो प्रक्रिया अहिले केही अपवाद सँग, स्वचालित गरिएको छ। यात्रीको राहदानीमा CBP प्रवेश स्ट्याम्प लगाइन्छ जसमा प्रवेश गरेको मिति, प्रवेशको वर्ग, र प्रवेश सकिने मितिको जानकारी दिएको हुन्छ। यदि यात्रीले आफ्नो वैदेशीक दर्ता, अध्यागमन अवस्था वा रोजगार प्राधिकरणको प्रमाणिकरणको लागि आफ्नो I-94को प्रतिलिपी लिन चाहेमा https://cbp.gov/travel/international-visitors/i-94 बाट प्राप्त गर्न सक्नेछ। तपाईंले CBP वेबसाइटमा प्रवेशको बारेमा जानकारी पुनरावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
पूर्व समयमा, CBP अधिकारीहरुले प्रविष्टि प्रदान गरिएका विदेशी यात्रीले एउटा कागज फारम I-94 (आगमन/प्रस्थान रेकर्ड) प्राप्त गर्दथे। यो प्रक्रिया अब केही अपवाद सँग, स्वचालित भएको छ । तपाईंले एउटा कागज फारम I-94 वा I-94W प्राप्त गरेर यदि अमेरिकाबाट प्रस्थान गर्दा तपाईँको कागज फारम I-94 आगमन/प्रस्थान रेकर्ड व्यावसायिक विमान वा CBP लाई फर्काउन असफल भएमा, निर्देशनका लागि CBP वेबसाइट हेर्नहोस्। अमेरिकी दूतावास जनरललाई तपाईंको कागज फारम I-94 वा I-94W नपठाउनुहोस्।
तपाईंले प्रविष्टि प्रदान गर्दा कागज फारम I-94, I-94 को सट्टा प्रवेश स्ट्याम्प प्राप्त गर्नुभएको थियो भने, तपाईंको राहदानी रेकर्ड विद्युतीय रुपमा सृष्टि गरिएको थियो, र कागज प्रतिलिपि तपाईंलाई दिइएको थिएन भन्ने बुझ्नुहोस् । CBPले विद्युतीय रुपमा अमेरिका देखि तपाईंको प्रस्थानको रेकर्ड गर्नेछ। CBP वेबसाइटमा धेरै जानकारी पाउनुहोस् ।
प्र.17 मेरो DS-160 पेस गर्ने र पुष्टि पृष्ठ प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धि प्रश्न छ। म थप जानकारीको लागि कहाँ जान सक्छु?
हाम्रो कल सेन्टर आवेदन फर्मका लागि सहायता प्रदान गर्न असमर्थ छ। DS-160 पूरा गर्न कुनै पनि सोधपूछको लागि निम्न वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।
प्र.18 मैले मेरो नाम परिवर्तन गरेँ। के मेरो पुरानो नामको U.S. भिसा अझै पनि मान्य हुन्छ?
यदि विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, वा अदालत आदेशका आधारमा कानुनी तवरले तपाईँको नाम परिवर्तन भएको छ भने, तपाईँले नयाँ राहदानी बनाउनु पर्ने हुन्छ । तपाईँसँग नयाँ राहदानी हुने बित्तिकै, राज्य विभागले तपाईंलार्इ नयाँ U.S. भिसाको लागि आवेदन गर्ने सुझाव दिन्छ जसले गर्दा तपाईंको संयुक्त राज्य अमेरिका जाने र फर्किने यात्रा सजिलो होस्।
प्र.19 DS-160 फारम भर्दा मैले सोसल मिडियाको बारेमा कुन जानकारी दिनु पर्नेछ?
३१ मई २०१९ देखि, डिपार्टमेंट अफ स्टेटले आप्रवासी र गैर-आप्रवासी भिसा आवेदन फारममा थप जानकारीको माग गरेको छ, जसमा विश्वभरिका अधिकांश U.S. भिसा आवेदकहरूबाट सोसल मिडिया पहिचान अनुरोध गरिएको छ। थप जानकरीको लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
आवेदकले कसरी "बलियो सम्बन्ध" साबित गर्ने?
के धारा 214 (b) अन्तर्गतको अस्वीकृती स्थायी हो?
संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा खुला समाज हो। अन्य थुप्रै देशहरूको विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिकाले धेरैजसो आगंतुकहरुलाई आन्तरिक नियंत्रण लागू गर्दैन जस्तै स्थानीय अधिकारीहरुमा दर्ता । हाम्रो अध्यागमन कानुनमा सिफारिस अधिकारीहरुले हरेक भिसा आवेदकलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एउटा उद्देश्यपूर्ण आप्रवासीको रुपमा हेर्नु आवश्यक छ। तपाईँले संयुक्त राज्य अमेरिकामा अभारग्रस्त यात्रा लाभ उठाउन, तपाईंलाई आगन्तुक वा विद्यार्थी भिसा जारी गर्नु तपाईँ स्वदेश फर्केर जानुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी छ।
(b) प्रत्येक विदेशी (खण्ड 101 (a) (15) को उप अनुच्छेद (L) वा (V)मा वर्णन गरिएको बाहेकको गैर आप्रवासी, र खण्ड 101(a)(15)(H)(i) को subclause(b1) बाहेक) मा वर्णन गरिएको बाहेकको गैर आप्रवासी भिसा आवेदकलाई कन्सुलर अफिसरले आफूलाई संतुष्ट नबनाए सम्म ऊ एउटा हुन सक्ने आप्रवासी हो भन्ने ठान्छ र अध्यागमनका अधिकारीहरूले पनि यसै गरी अध्यागमनमा प्रवेश दिनु अघि यस्ता गैर आप्रवासी भिसा आवेदक खण्ड 101(a)(15) अन्तर्गत एउटा गैर आप्रवासी अवस्थाको हकदार छ/छैन भन्ने विचार गर्छन । कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अन्तर्गत विशेषाधिकार, छुट, र प्रतिरक्षणको हकदार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको एउटा अधिकारी, वा यस्ता विदेशीको नजीकको परिवारको चाकर, नोकर, कर्मचारी रहेको यस्तो कुनै पनि विदेशीले आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन गर्न वा भिसा प्राप्त गर्न सक्दैनन, वा खण्ड 247(b) द्वारा निर्धारित गरिए अनुसार फारम र विषयमा एउटा लिखित माफी कार्यान्वयन नभएसम्म आप्रवासीको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने छैनन्।
हाम्रो कन्सुलर अधिकारीहरुको कार्य कठिन छ। कुनै व्यक्ति अस्थायी भिसा प्राप्त गर्न योग्य छ /छैन भन्ने तिनीहरूले धेरै नै कम समयमा निर्णय लिनुपर्छ। अधिकांश अवस्थामा छोटो अन्तर्वाता र आवेदकले प्रदान गरेका प्रमाणको अवलोकन गरेपछि निर्णय लिइन्छ। आगन्तुक वा छात्र भिसाको योग्यताको लागि आवेदकले धारा 101(a)(15)(B) वा INAको (F) खण्डहरुका आवश्यकताहरु क्रमशः पुरा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न असफल भएमा INA 214(b) अन्तर्गत भिसा अस्वीकृत हुनेछ। यस्तो अस्वीकृतीको धेरै जसो आधार यस्ता भावी अतिथि वा विद्यार्थी हुन् जसको विदेश निवास त्याग्ने कुनै मनसाय देखिदैँन । यस्ता आवेदकले अस्थायी प्रवासको अन्तमा संयुक्त राज्य अमेरिका छाडेर जान बाध्य गराउने विदेशी सम्बन्ध छ भनेर यस्तो निवासको अस्तित्व प्रमाणित गर्नसक्नु पर्छ । व्यवस्थाले आवेदक माथि प्रमाणित गर्नुपर्ने बोझ राखिदिएको छ।
प्रश्न -2 आवेदकले "बलियो सम्बन्ध" कसरी साबित गर्न सक्छ?
सम्बन्ध आफ्नो देशमा तपाईंलाई बाँध्ने तपाईंको जीवनका विभिन्न पक्षहरू हुन्। बलियो सम्बन्ध देश, शहर, र व्यक्ति हेरी भिन्न हुन्छन, तर उदाहरणमा पर्दछन:
भिसाको अन्तर्वाता भइरहेको बेला, कन्सुलर अधिकारीहरुले प्रत्येक आवेदनलाई अलग्गै हेर्दछन् र आवेदकको परिस्थिति, यात्रा योजना, आर्थिक स्रोत, र संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा बाहिरको सम्बन्ध जसले अस्थायी भ्रमण पछि आवेदकको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रस्थान सुनिश्चित गर्छ आदि कुरालाई विचार गर्दछन् ।
प्र.3 के धारा 214 (b) अन्तर्गतको अस्वीकृती स्थायी हो?
होइन, खण्ड 214(b) अन्तर्गतको अस्वीकृती, वा अयोग्यता त्यही खास आवेदनको लागि हो, त्यसकारण एकपल्ट आवेदन बन्द भएपछि कन्सुलर विभागले अगाडि कुनै पनि कारबाही गर्न सक्दैनन्। कुनै अपील प्रक्रिया छैन। यदि तपाईंलाई लाग्छ की भिसा निर्णय सम्बन्धित तपाईँसँग थप जानकारी छ, वा तपाईंको अन्तिम आवेदन देखि तपाईंको परिस्थितिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएका छ भन्ने महसुस भएको छ भने, तपाईंले भिसाको लागि पुनः आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। पुनः आवेदन गर्न तपाईंले एउटा नयाँ आवेदन भर्नुपर्छ, आवेदन शुल्क तिर्नुपर्छ, र नयाँ भिसा अन्तर्वाताको लागि मिति तय गर्नुपर्छ। फेरि आवेदन गर्ने योजना पुनरआवेदन प्रक्रियाको विषयमा जान्न अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा पुनरावलोकन गर्नुहोस्।
अध्यागमन कानुनले विदेशमा भएका कन्सुलर अधिकारीहरुलाई भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तिनीहरूले सबै भिसाका मुद्दाहरूमा अन्तिम कुरा राख्न सक्छन्। नियम अनुसार, अमेरिकी राज्य विभागलाई कन्सुलरको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने अधिकार छ, तर तथ्यका आधारमा निर्णय भिन्नताको कारण यो अधिकार कानुनी व्याख्या गर्नमा सीमित छ । यस्तो खण्डन भएमा यो प्रश्न उठ्छ कि आवेदकको विदेशमा आवश्यक निवास छ कि छैन, जो एउटा सत्यतथ्य हो। तसर्थ, यो समस्या समाधान गर्न हाम्रा विदेश सेवा पोस्टमा भएका कन्सुलर अधिकारीहरुको अधिकार भित्र पर्दछ। आवेदकले बलियो सम्बन्ध देखाएर नयाँ चित्तबुझ्दो प्रमाणको प्रस्तुति मार्फत मात्र पूर्व भिसा अस्वीकृती परिवर्तन गर्न पोस्टलाई प्रभाव पार्न सक्छ।
214(b)भन्दा बाहेकको भिसा अयोग्यताको बारेमा जानकारीका लागि, कृपया अमेरिकी राज्य विभागको कन्सुलर मामिला वेभसाइटमा हेर्नुहोस्।
म पर्यटक वा व्यापार भिसामा संयुक्त राज्य अमेरिकामा कहिलेसम्म रहन सक्छु?
मेरो अतिथि भिसा (B-1/B-2) मैले संयुक्त राज्य अमेरिकामा आगमन गर्न चाहेको मिति पछि समाप्त हुदैँछ। के मैले प्रस्थान गर्नुअघि नयाँ भिसा लिनुपर्छ?
मेरो अमेरिकी भिसा अर्को6महिनामा समाप्त हुदैँछ। मैले वर्तमान भिसा समाप्त भएपछि एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छ वा म पहिल्यै आवेदन गर्न सक्छु?
मैले हालै मेरो पुरानो राहदानीमा भएको मेरो मातृ नामसँगको एउटा वैध B-1/B-2 भिसा लिएको छु। म मेरो विवाहको नाम भएको नयाँ राहदानीमा यो भिसा स्थानान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रक्रिया के हो?
मेरो वर्तमान अमेरिकी भिसा मैले पछिल्लो नौकरी गर्दै गरेको समय मलाई जारी गरेको थियो। अहिले म एउटा नयाँ कम्पनीमा नयाँ काम गर्न थालेको छु र मेरो नयाँ रोजगारदाताले मलाई अर्को महिनामा निर्धारित हुने संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा सम्मेलनमा उपस्थित गराउन चाहन्छन्। म यही भिसा प्रयोग गर्न सक्छु वा मैले एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्नु पर्छ?
मेरो बच्चा संयुक्त राज्य अमेरिकामा अध्ययनरत छ। के म उसँगै बस्न सक्छु?
अमेरिकी गैर आप्रवासी भिसाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको पोर्टमा प्रवेशको (विमानस्थल/बन्दरगाह)को यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंले आफ्नो प्रवेशको गन्तव्य पोर्टमा पुगेपछि, अमेरिका भन्सार र तपाईंका प्रवेशको प्रक्रिया गर्ने सीमा सुरक्षा अधिकारीले तपाईं देशमा रहन सक्ने समयको निर्धारण गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो गैर आप्रवासी भिसाको वैधता भएको अन्तिम दिनसम्म प्रवेश पोर्टको यात्रा गर्न सक्नु हुन्छ। भिसा अवधिले तपाईं कानूनी तवरले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहन सक्ने समयको निर्धारण गर्दैन; मात्र भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईंको आगमन भए लगत्तै निर्णय गर्न सक्छ।
तपाईंले आफ्नो वर्तमान भिसा समाप्त भएसम्म प्रतिक्षा गर्नु पर्दैन। तपाईंको वर्तमान भिसा वैध छ भने पनि तपाईंले एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्र.4 मैले हालै मेरो पुरानो राहदानीमा भएको मेरो मातृ नामसँगको एउटा वैध B-1/B-2 भिसा लिएको छु। म मेरो विवाहको नाम भएको नयाँ राहदानीमा यो भिसा स्थानान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रक्रिया के हो?
U.S. भिसा एउटा राहदानीबाट अर्कोमा स्थान्तरण गर्न मिल्दैन । आफ्नो नाम कानुनी तवरमा विवाह, छोडपत्र, वा अदालत आदेशका आधारमा परिवर्तन भएको छ भने, तपाईंले नयाँ राहदानी बनाउनु पर्छ। तपाईँसँग नयाँ राहदानी हुने बित्तिकै, राज्य विभागले तपाईंलार्इ नयाँ U.S. भिसाको लागि आवेदन गर्ने सुझाव दिन्छ जसले गर्दा तपाईंको संयुक्त राज्य अमेरिका जाने र फर्किने यात्रा सजिलो होस्।
प्र 5. मेरो वर्तमान अमेरिकी भिसा मैले पछिल्लो नौकरी गर्दै गरेको समय मलाई जारी गरेको थियो। अहिले म एउटा नयाँ कम्पनीमा नयाँ काम गर्न थालेको छु र मेरो नयाँ रोजगारदाताले मलाई अर्को महिनामा निर्धारित हुने संयुक्त राज्य अमेरिकामा एउटा सम्मेलनमा उपस्थित गराउन चाहन्छन्। म यही भिसा प्रयोग गर्न सक्छु वा मैले एउटा नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्नु पर्छ?
तपाईंको बच्चा भेट्न तपाईंले आफ्नो B-1/B-2 भिसा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ (वा योग्य भएमा भिसा छूट कार्यक्रममा यात्रा गर्नुहोस्), तपाईंको आप्रवासी, काम, वा विद्यार्थी भिसा नभएसम्म, तपाईं आफ्नो बच्चासँग बस्न सक्नु हुनेछैन ।
याचिका भनेको के हो?
अस्थायी काम भिसाको आवेदनको लागि कुनै उमेर सीमा छ?
मेरो संयुक्त राज्यमा आधारित नातेदार काम भिसाको लागि मेरो प्रायोजक बन्न सक्छ?
धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्कको भुक्तान कसले गर्छ र कहिले?
प्र.1 याचिका भनेको के हो?
अमेरिकी दूतावासमा अस्थायी कामदारको भिसाको लागि आवेदन गर्नुभन्दा अघि USCIS देखि अनुमोदित फारम I-129, गैर आप्रवासी कार्यकर्ताको लागि याचिका पाउनुपर्छ । यो निवेदन तपाईंको प्रस्तावित रोजगार शुरू गर्ने मितिदेखि ६ महिना अघि तपाईंको भावी रोजगारदाताले पेश गर्नुपर्छ। तपाईंको रोजगारदाताले प्रशोधनका लागि पर्याप्त समय प्रदान गर्न शिघ्रातिशिघ्र ६ महिना अवधि भित्रै आवेदन फाइल गर्नुपर्छ। एकपल्ट अनुमोदन भए पछि, तपाईंको रोजगारदाताले फारम I-797, एक्सन सूचना पठाउनेछ। थप जानकारीको लागि USCIS अस्थायी मजदुर वेबपेज हेर्नुहोस्।
प्र.3 अस्थायी काम भिसाको आवेदनको लागि कुनै उमेर सीमा छ?
प्र.4 मेरो संयुक्त राज्यमा आधारित नातेदार काम भिसाको लागि मेरो प्रायोजक बन्न सक्छ?
तपाईंको फारम I-797मा वा रोजगार पत्रमा उल्लेख गरेको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने मितिको १० दिन अगाडी मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडी प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न ।
प्र.6 धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्कको भुक्तान कसले गर्छ र कहिले?
L-1 भिसा आवेदक जो एकमुष्ठ याचिकामा यात्रा गर्नुहुन्छ, उसैले धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्क तिर्नुपर्छ। व्यक्तिगत L, H-1B र H-2B याचिकाको लागि अमेरिकी याचिका दायर गर्ने आवेदकले धोखाधडी रोकथाम र पहिचान शुल्क USCIS लाई तिर्नु पर्दछ।
I-20 के हो र यसलाई मैले कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा आगन्तुक भिसामा भएको समयमा कसैले आफ्नो आगन्तुक भिसा विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्न सक्छ यदि उसले स्कूलमा दाखिला पायो र I-20 फारम प्राप्त गर्यो भने?
मैले एउटा भिन्न स्कूलका लागि I-20 प्राप्त गरेँ भने के हुन्छ?
म एउटा H-1B को रुपमा काम गर्दै थिएँ र अहिले एउटा F-1को रूपमा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको छु। के मैले विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न मेरो देश फर्कनु पर्छ?
प्र.1 I-20 के हो र यसलाई मैले कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
फारम I-20 प्रमाणित वद्यालय द्वारा जारी गरिने अमेरिकी सरकारी कार्यालयको फारम हो जुन सम्भाव्य गैर आप्रवासी विद्यार्थीहरुले F-1 वा M-1 भिसाको आवेदन गर्नका लागि प्राप्त गर्न आवश्यक छ । I-20 फारम स्वीकृत भएको प्रमाण हो, जसमा SEVIS I-901 शुल्क तिर्न आवश्यक जानकारीहरु, भिसाका लागि आवेदन गर्न वा भिसाको अवस्था परिवर्तन गर्न, र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भर्ना हुन आवश्यक जानकारी पाइन्छ। फारम I-20 मा विद्यार्थीको SEVIS पहिचान नंबर हुन्छ जुन N बाट शुरु भएर लगत्तै नौ अंकको हुन्छ । SEVIS नंबर फारमको माथि दाहिनेपट्टी बारकोडको सीधा हुन्छ।
तपाईंले आफ्नो I-20 पाउना साथ गैर आप्रवासी विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ। तपाईंले समयमै मिति सुनिश्चित गर्न छिट्टै आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। तर, विद्यार्थी भिसा तपाईंको I-20मा उल्लेख गरिएको शुरु हुने मितिदेखि १२० दिन भन्दा अगाडि जारी गर्न सकिदैन।
तपाईँको प्रारम्भिक प्रवेशको लागि, तपाईंको I-20मा उल्लेख गरे अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम शुरु हुने मिति भन्दा छिटोमा ३० दिन अगावै मात्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ चाहे तपाईँको भिसा जहिले जारी भएको होस्।
प्र.4 संयुक्त राज्य अमेरिकामा आगन्तुक भिसामा भएको समयमा कसैले आफ्नो आगन्तुक भिसा विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्न सक्छ यदि उसले स्कूलमा दाखिला पायो र I-20 फारम प्राप्त गर्यो भने?
सकिन्छ। यदि तपाईँले संयुक्त राज्य अमेरिकामा गैर आप्रवासी भिसामा कानुनी रुपमा प्रवेश गर्नु भएको थियो, यदि तपाईँको गैर आप्रवासी भिसाको स्टेटस अझै वैध छ, यदि तपाईँले आफ्नो स्टेटसको दौरान कुनै सर्तहरु मिच्नु भएको छैन र यदि तपाईँले कुनै यस्तो क्रियाकलाप गर्नुभएको छैन जसले तपाईँलाई अयोग्य ठहर गर्दैन भने, सामान्य रुपमा, तपाईँले आफ्नो गैर आप्रवासी भिसाको स्टेटस परिवर्तनको लागि आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। थप विवरणहरू लागि, USCIS वेबसाइट हेर्नुहोस्।
प्र.5 मैले एउटा भिन्न स्कूलका लागि I-20 प्राप्त गरेँ भने के हुन्छ?
तपाईंले आफ्नो अपॉइंटमेंट तय भएपछि अर्को I-20 प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईंले भिसा अन्तर्वाताको समयमा नयाँ I-20को विषयमा अमेरिकी कन्सुलर अफिसरलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ।
प्र.6 म एउटा H-1B को रुपमा काम गर्दै थिएँ र अहिले एउटा F-1को रूपमा विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको छु। के मैले विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न मेरो देश फर्कनु पर्छ?
पर्दैन । तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने तपाईंले नयाँ भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक छैन किनकि भिसा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशको लागि मात्र चाहिन्छ। तपाईंलाई आफ्नो स्टेटस समायोजन गराउनु छ भने USCIS मा जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिका छाड्नुभयो भने पुन: प्रवेश गर्न विद्यार्थी भिसाको लागि आवेदन गर्न आवश्यक हुन्छ।
तपाईंको भिसा जहिले जारी भएको भएता पनि, तपाईंको फारम DS-2019मा उल्लेख गरे अनुसार विनिमय आगंतुक कार्यक्रमको शुरु हुने मिति भन्दा छिटोमा ३० दिन अगावै मात्र संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्न सक्छन्।
"दुई वर्षे नियम" अमेरिकी अध्यागमन कानुनको एउटा खण्डको लागि प्रयोग गरिने साधारण शब्द हो, जसले धेरै विनिमय आगंतुकहरुलाई आफ्नो विनिमय भ्रमणको अन्त्य पछि, अमेरिका कुनै पनि भिसामा जस्तै H-1, L-1, K-1र आप्रवासी भिसा आदिमा फर्कनु अघि, स्वदेश फर्कन र त्यहाँ कम्तीमा दुई वर्षको लागि शारीरिक रुपमा उपस्थित हुन बाध्य पार्छ । आफूलाई "दुई वर्षे नियम" लागू हुन्छ/हुदैँन जान्नको लागि तपाईँले आफ्नो J-1 प्राप्त गर्दा पाउनु भएको DS-2019 मा हेर्न सक्नुहुन्छ । अन्तिम निर्णय तपाईँले पछि H-1, L-1, K-1 वा आप्रवासी भिसा आवेदन गर्दा लिइन्छ।
दुई वर्षे नियमको अधीनमा J-1 भिसा धारकहरुलाई दुई वर्षको लागि स्वदेश नफर्की वा दुई वर्ष नियमको छूट पाएको प्रमाण नदेखाइ, संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न र गैर आप्रवासी स्टेटस (उदाहरणका लागि एउटा J-1 भिसा देखि एउटा H-1मा) समायोजन/परिवर्तन गर्न वा स्थायी निवासी अवस्था (हरियो कार्ड)को लागि आवेदन गर्न निषेध गरिएको छ। तपाईं दुई वर्षे नियममा पर्नु भए/नभएको कुरा विभिन्न कारक तत्वहरुमा भर पर्छ जसमा तपाईँको कोषको स्रोत र तपाईंको देशको "सीप सूची" लगायत पर्न सक्छ । यो तपाईंले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिताएको समयावधिको आधारमा निर्धारित हुँदैन।
संभवतः। अमेरिकी राज्य विभागको भिसा कार्यालयले मात्र दुई वर्षे नियमको छूट प्रदान गर्न सक्छ। तपाईंको राहदानीमा जेसुकै एनोटेट गरिएको भएता पनि, तपाईं नियमको अधीनमा हुनुहुन्छ भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भिसा कार्यालयको हो। तपाईं दुई वर्षे नियमको भित्र पर्नुहुन्छ भने, तपाईंले छूट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं दुई वर्षे नियमको अधीनमा हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईंले अझै पनि माथि उल्लेख गरेका बाहेक पर्यटक भिसा वा कुनै पनि अन्य गैर आप्रवासी भिसाको योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँ अमेरिकामा पारवाहन बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि रहन विशेषाधिकार खोज्नुहुन्छ, जस्तै साथीहरूसँग भेट वा घुमफिर भने तपाईँले सोहि उद्देश्यका लागि आवश्यक भिसा प्रकारका लागि योग्य भइ प्राप्त गर्नुपर्छ, जस्तै B-2 भिसा ।
भिसा अन्तर्वाता पछि मैले आफ्नो पासपोर्ट कसरी फिर्ता पाउँछु?
मैले दूतावास/कन्सुलेटबाट राहदानी लिन के देखाउनु पर्छ?
पहिचानको प्रमाणको रूपमा कस्ता आईडी स्वीकार्य हुन्छन्?
म बाहेक कसैले मेरो राहदानी लिन सक्छ?
प्र.1भिसा अन्तर्वाता पछि मैले आफ्नो पासपोर्ट कसरी फिर्ता पाउँछु ?
भिसा आवेदन स्वीकृती पछि, आफ्नो राहदानी र भिसा, तपाईंले भिसा अन्तर्वाता निर्धारण गर्दा चयन गर्नुभएको पिकअप स्थानबाट संकलन गर्न सक्नुहुन्छ । जब राहदानी चयन स्थानमा उपलब्ध हुनेछ तब तपाईंले इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
प्र.2 मैले दूतावास/कन्सुलेटबाट राहदानी लिन के देखाउनु पर्छ?
तपाईंको राहदानी र भिसा अनाधिकृत व्यक्तिलाई दिइएको छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न, आफ्नो राहदानी सङ्कलन गर्दा तपाईंले पहिचानको लागि सरकारद्वारा जारी फोटो आईडी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
प्र.3 पहिचानको प्रमाणको रूपमा कस्ता आईडी स्वीकार्य हुन्छन्?
तपाईंलाई सरकारले जारी गरेको सक्कल फोटो आईडी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
प्र.4 म बाहेक कसैले मेरो राहदानी लिन सक्छ?
सक्छ। तर, तपाईंको प्रतिनिधि - परिवारका सदस्यहरू भएता पनि – तपाईंको राहदानी सङ्कलन गर्न निम्न प्रस्तुत कुराहरु प्रस्तुत गर्नुपर्छ:
यदि प्रतिनिधिले तपाईंको राहदानी संकलन केन्द्रबाट संकलन गर्दै हुनुहुन्छ भने - परिवारका सदस्यहरूले समेत - प्रतिनिधिले प्रस्तुत गर्नुपर्ने:
पहिचानको लागि तपाईंको सरकारद्वारा जारी सक्कल फोटो आईडी
तपाईंको सरकारद्वारा जारी फोटो आईडीको प्रतिलिपी
तपाईंले प्रतिनिधिलाई अख्तियारी दिएको, तपाईंको हस्ताक्षर भएको एउटा अख्तियार पत्रमा जसमा निम्न जानकारी हुनु पर्छ:
तपाईंको प्रतिनिधिको पूरा नाम जुन प्रतिनिधिले देखाउने प्रतिनिधिको सरकारद्वारा जारी फोटो आईडी को पूरा नामसँग मेल खाओस्
कृपया अख्तियार पत्रका ढाँचाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
आवेदक १८ वर्ष मुनिको हो भने, निम्न कागजात आवश्यक छन्:
आवेदकको आमा/बाबुको हस्ताक्षर भएको सक्कल अख्तियार पत्र
आवेदकको अख्तियार पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने आमा/बाबुको सरकारले जारी गरेको फोटो आईडीको स्पष्ट प्रतिलिपि
प्रतिनिधिको सरकारद्वारा जारी सक्कल फोटो आईडी
नोट: एउटा समूह/परिवारको मामलामा, प्रत्येक आवेदकहरुको छुट्टा छुट्टै अख्तियार पत्र आवश्यक छ।
हालै दूतावास/कन्सुलेटमा आप्रवासी भिसाको लागि मेरो अन्तर्वार्ता भएको थियो र मैले आफ्नो राहदानी र भिसा प्राप्त गरेँ। तर मैले विमानमा आफ्नो साथमा अमेरिका लैजानका लागि शिलबन्दी गरिएको खाममा कागजातहरू भने पाइनँ। मेरो वकिल/आवेदक/साथीहरूले मलाई बताएअनुसार म ती कागजातबिना उड्न पाउँदिनँ। मैले के गर्नुपर्ला?
प्र.1: हालै दूतावास/कन्सुलेटमा आप्रवासी भिसाको लागि मेरो अन्तर्वार्ता भएको थियो र मैले आफ्नो राहदानी र भिसा प्राप्त गरेँ। तर मैले विमानमा आफ्नो साथमा अमेरिका लैजानका लागि शिलबन्दी गरिएको खाममा कागजातहरू भने पाइनँ। मेरो वकिल/आवेदक/साथीहरूले मलाई बताएअनुसार म ती कागजातबिना उड्न पाउँदिनँ। मैले के गर्नुपर्ला?
उ: अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही आप्रवासी भिसा आवेदनहरूको विद्युतीय प्रोसेसिङ सुरु गरेको छ। यदि राष्ट्रिय भिसा केन्द्र वा तपाईँको भिसा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने दूतावास/कन्सुलेटले CEAC पोर्टलमार्फत तपाईँलाई नागरिक र वित्तीय लगायतका सहायक कागजात पेश गर्न लगाएको भए तपाईँको भिसा नयाँ विद्युतीय प्रक्रियाअन्तर्गत जारी गरिएको हो। तपाईँको भिसा अन्तर्वार्ता लिने र भिसा जारी गर्ने दूतावास/वाणिज्य कन्सुलेटले तोकेरै जानकारी गराएको अवस्थामा बाहेक तपाईँले अमेरिकाको प्रवेश विन्दुमा प्रस्तुत गर्नका लागि कागजातहरूको शिलबन्दी खाम हातमा बोक्न आवश्यक छैन। तपाईँका कागजातहरू अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको अमेरिका प्रवेश गर्ने सबै आप्रवासीहरूको निरीक्षण गर्ने भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (DHS/CBP) कार्यालयमा विद्युतीय रूपमा पठाइसकिएको छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुनुहोस् । तपाईँ अमेरिकाको प्रवेश विन्दुस्थित आप्रवासन नियन्त्रणमा आइपुग्दा CBP अधिकारीहरूलाई अमेरिकामा तपाईँको प्रवेश प्रक्रियाको लागि आवश्यक सबै जानकारी पुगिसकेको हुनेछ। यस नयाँ विद्युतीय प्रक्रियाले तपाईँको आप्रवासी भिसा आवेदन र अमेरिका प्रवेशको प्रक्रियामाथिको कार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
प्र.2: मैले आफ्ना नागरिक र वित्तीय कागजातहरू विद्युतीय रूपमा पठाएँ वा हुलाकबाट पठाएँ भन्ने कुरा नै मलाई याद छैन। मेरो भिसा कागजविहीन प्रक्रियाअन्तर्गत जारी गरिएको थियो कि भनी निर्धारण गर्ने अर्को तरिका छ?
प्र.3: आप्रवासी भिसा पाएका र अमेरिकाको प्रवेश विन्दुसम्म हातमा शिलबन्दी खाम बोक्नुपरेका अन्य मानिसहरू मैले चिनेको छु। तिनीहरूका लागि चाहिँ प्रक्रिया किन फरक भएको होला?
यदि मैले www.ustraveldocs.com मा मेरो प्रोफाइल दर्ता गरे तर भिसा आवेदन गरिन अनि अर्को देश गए भने, मैले के गर्नु पर्ला वा मेरो अघिल्लो आवेदन बाहेक, मैले अर्को देशबाट नयाँ भिसा आवेदन पेश गर्न चाहे भने के गर्नु पर्ला ?
यो वेब पेज को तल रहेको लिंक "भूल्नु भयो तपाईंको पासवर्ड ?" क्लिक गर्नुहोस् । प्रयोगकर्ता नाम आफ्नो इमेल ठेगाना राख्नुहोस् र सबमिट गर्नुहोस् । तपाईंले आफ्नो भिसा आवेदन थाल्दा प्रयोग गर्नु भएको इमेल ठेगाना तपाईँले टाइप गर्ने इमेल ठेगानासँग मेल खानुपर्छ। नयाँ पासवर्ड तपाईँको इमेल ठेगाना मा पठाइनेछ।
नोट: नयाँ पासवर्ड भएको इमेल noreply@ustraveldocs.com भन्ने ठेगानाबाट पठाइने छ। केही इमेलहरुको नियमले अज्ञात प्रेषकहरुको इमेललाई फिल्टर गरेर स्प्याम वा जंक मेल फोल्डरमा पठाउँछन् । यदि तपाईंले आफ्नो इमेलमा सूचना प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कृपया आफ्नो जंक र स्पैम इमेल फोल्डरहरूमा सन्देश खोज्नुहोस्।
प्र.2यदि मैले www.ustraveldocs.com मा मेरो प्रोफाइल दर्ता गरे तर भिसा आवेदन गरिन अनि अर्को देश गए भने, मैले के गर्नु पर्ला वा मेरो अघिल्लो आवेदन बाहेक, मैले अर्को देशबाट नयाँ भिसा आवेदन पेश गर्न चाहे भने के गर्नु पर्ला ?
यदि दुवै देशमा CGI द्वारा सेवा प्रदान गरिएको छ भने तपाईँले अर्को प्रोफाइल बनाउन आवश्यक छैन। तपाईंले यस वेबसाइट मा हाम्रो संपर्क खण्ड मा सम्पर्क गर्नु र आफ्नो राहदानी नम्बर, UID वा इमेल ठेगाना हामीलाई प्राप्त गराउनु होस् र हामी तपाईँको प्रोफाइल लाई पुन: नयाँ देशमा सारी दिन्छौं जहाँ तपाईं आफ्नो अमेरिकी भिसाको आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँ CGI को सेवा नभएको देशबाट आवेदन गर्न चाहनु हुन्छ भने नँया प्रोफाइल बनाउनु पर्छ । याद राख्नुहोस्, एउटा देशमा तिरेको MRV शुल्क रसिद अर्को देशमा स्थानान्तरण हुदैँन ।